Cilaaqaadka: Hoos u Dhigida Fursadaha Galmada Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Relationships Hoos u Dhigida Fursadaha Galmada
Yaraynta rabitaanka galmada waa dhibaato dhab ah cilaaqaadka muddada dheer. Waxay ku timaadaa inay soo saarto dopamine yar inta lagu guda jiro kulamada galmada ee isla lamaanaha. Isla mar ahaantaana maskaxdu waxay yareyneysaa tirada daawadayaasha loo yaqaan 'dopamine receptors' waqti ka dib si ay uga baaraandegaan saameynta abaalmarinta uu qofkaasi keeno. Dopamine waa neerfaha kiimikada kiciya rabitaanka iyo dhiirigelinta. Waxay ku kobceysaa cusbooneysiin. Ka dib markii 'bilihii malabka neerfaha kiimikada' ay gabowday, waxaan dareemi karnaa wax ka yar ama aan lahayn rabitaan galmo ama rabitaanka lamaanahayaga. Waxaa laga yaabaa inaan diiradda saarno sidii aan u dhisi lahayn xirfad ama aan korin lahayn carruurta halkii. Micnaheedu maahan inaanan dareemeynin jacayl ama inaan kuxiran nahay saygeena, kaliya in rabitaanka galmada uu kayaryahay maalmahaas hore, maalmaha xiisaha leh.
Dareenkaas oo ka mid ah caajisku wuxuu dadka qaar ku wadi karaa in ay raadsadaan fursado cusub oo la isku duubo oo ay la wadaagaan lamaanayaasha raba, ama dheelitir ah. Maanta jimicsi daroogada internetka ah ayaa cidhiidhi ku ah cilaaqaadyo badan. Saamaynta Coolidge waa sababta sababta filimmada, laakiin gaar ahaan pornography internetka, waa mid soo jiidasho leh. Nidaam joogto ah ee saaxiibada riyooyinka iyo muuqaalka ah ee muuqda ayaa muuqata annaga oo nala soo xidhiidho, qaboojin, guji ama ku dheji. Iyadoo aan laga helin saamaynta Coolidge, ma jiri doonto porno internet. Maskaxda xubinimada hore uma sheegi karto faraqa u dhexeeya saaxiibada dhabta ah iyo 2-cabbirka, muuqaalada dhabta ah ee muuqaalka shaashadda.
Si loo caawiyo dib u dhiska dabka, beddelidda dabeecadaha isku xirka ayaa si weyn loogu talinayaa. Kuwani waa calaamado aan macquul ahayn ee maskaxda limbic ee ka caawisa nabadda dareenka kala-jajabinta ama xanaaqa. Arag tani faa'iido leh article wixii faahfaahin dheeraad ah. Mid ka mid ah buugaagta ugu fiican ee suuqa oo aan dhihin oo kaliya qalabka neuroscience iyo cilmi-nafsiga oo hoosta ka dhigaya ifafaaladan laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay hage tallaabo tallaabo ah oo lagu bogsiinayo, waa Cadaadiska Goobta ee Cupid - Loogu Talagalay Caadi Ahaanshaha Isdhex galka Xiriirka Galmada, by Marnia Robinson. Yaa laga heli karaa halkan. Sidoo kale ka fiirso podcast si aad u aragto mawduuc dhaqso ah mawduuca qoraaga.
<< Saamaynta Coolidge Wasmo & Porno >>